China အလိုအလျောက် gantry frame ဘားအ ၀ တ်လျှော်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ CBK Carwash
Range Assembling 24000x6580mm
ရေချိုးရန်ရရှိနိုင်သောကား ဘတ်စ်ကား၊ ထရပ်ကားဘူး
ကားရေချိုစွမ်းရည် ဘတ်စ်ကား / နာရီ 15-20
အဓိကဗို့အား AC 380v / 50hz
ရေပေးဝေရေး DN25mm / ရေစီးနှုန်း≥200L / min
လေဖိအား 0.75-0.9Mpa / လေစီးနှုန်း≥0.1m³ / min
ရေ / လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု 250L / ကား, 0.59kw / ဘတ်စ်ကား
ခေါင်းလျှော်ရည်သုံးစွဲမှု 25ml / Car
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမျိုးအစားကားအဝတ်လျှော်စက်၏ layout နိယာမ -
၁။ မော်တော်ယာဉ်များ ၀ င်ထွက်ရန်အဆင်ပြေသည်။ ကားအတွင်းအ ၀ တ်လျှော်ခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဝင်ပေါက်တွင်တတ်နိုင်သမျှစောင့်ဆိုင်းရန်နေရာ ၃ ခုထက်မနည်းသင့်ပါ။
၂။ ထွက်ပေါက်ဖွင့်ရန်လိုအပ်လျှင်အကွာအဝေးသည် ၇ မီတာထက်မပိုစေရ။ ထွက်ပေါက်လမ်းကြောရှိယာဉ်များသွားလာမှုကိုထိခိုက်သောအတားအဆီးမရှိစေရ။ သူတို့သည်ကားအဝတ်လျှော်ထဲမှထွက်ပြီးသည့်နောက်တွင်ယာဉ်များနောက်သို့လှည့်မသွားပါ၊
3. သန့်ရှင်းရေးareaရိယာသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အလုပ်လုပ်သောယာဉ်လေးစီးကိုနေရာချနိုင်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ သန့်ရှင်းရေးနေရာတွင်လေဟာနယ်၊ လေသေနတ်၊ ရေပုံး၊ ရေကန်နှင့်အခြားပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသည်။
4. မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၊ အဝတ်လျှော်စက်၏ထွက်ပေါက်ကိုမပိတ်သင့်ပါ။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကားအ ၀ ယ်စက်အတွက်အရောင်ရွေးချယ်မှုဥပမာ
·အပေါ်ယံအင်္ကျီသည်တောက်ပသောအရောင်နှင့်မြင့်မားသောလေထုနှင့်အတူ DuPont မှုန်ရေမွှားမုန့်ဖုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။
၁ ။ CBKWash ကားအဝတ်လျှော်စက်၏လည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သောဗို့အားကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည် ၃ ဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပါဝါထောက်ပံ့မှုလိုအပ်သည်။ တရုတ်တွင် 380V / 50HZ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မတူညီသောဗို့အားသို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းလိုအပ်ပါကသင့်အတွက်မော်တာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးပန်ကာများ၊ ဗို့အားနိမ့်လျှပ်စစ်ကေဘယ်များ၊
၂ ။ ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဖောက်သည်များသည်မည်သည့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်?
ပထမ ဦး စွာမြေပြင်သည်ကွန်ကရစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်ကွန်ကရစ်အထူသည် ၁၈ စင်တီမီတာထက်မနည်းစေရန်သေချာစေရမည်
1. 5-3 တန်ချိန်သိုလှောင်မှုပုံးကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်
၃ ။ Carwash ပစ္စည်းကိရိယာ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပမာဏဘယ်လောက်လဲ။
ရထားလမ်း ၇.၅ မီတာသည် 20'Ft ကွန်တိန်နာထက်ပိုရှည်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကို 40'Ft container ဖြင့်တင်ပို့ရန်လိုအပ်သည်။
၄ ။ ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့ဆေးကြောခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ထုတ်လုပ်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရသနည်း။
(၄) X-Stream ၏သက်ရောက်မှုသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်၊ သင်သည်“ ပွတ်ခြင်းမရှိဘဲပွတ်တိုက်ကဲ့သို့သောသန့်ရှင်းခြင်း” ကိုရရှိသည်။
မျက်နှာပြင်သို့ထောင့်၊ အသံအတိုးအကျယ်၊ အရှိန်အဟုန်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်မြင့်မားသောဖိအားသည်ထိရောက်သောဖိအားသန့်ရှင်းရေးအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထည့်သွင်း!
၅ ။ ပင်မစာမျက်နှာတွင်တွေ့ရသော L ကိုလက်ကိုင်အနေနှင့်ကားရေဆေးခြင်းသည်ပလပ်စတစ်ကားရပ်နားရန်အဘယ်ကြောင့်သုံးသနည်း။
၆ ။ CBK ဆေးကြောခြင်းနှင့်အခြား touchless ပံ့ပိုးပေးသူများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုကဘာလဲ။
၇ ။ ငါတို့ကားအဝတ်လျှော်စက်၏အသုံးချနယ်မြေများကော။
လက်ရှိအချိန်တွင်စျေးကွက်တွင်အလိုအလျောက်ကားအ ၀ တ်လျှော်စက်၏အမှတ်တံဆိပ်အမြောက်အများရှိနေပြီးအရည်အသွေးမှာမညီမညာဖြစ်နေသည်။ ကွန်ယက်ပေါ်ရှိလူသိရှင်ကြားသည်အမှန်တကယ်ဝေးကွာသည်။ သို့မှသာအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ရွေးချယ်သည့်အခါအချက်အလက်အစစ်အမှန်ကိုမရနိုင်ပါ။ နောက်ပိုင်းအသုံးပြုမှုတွင်အမှားအယွင်းအမျိုးမျိုးရှိပြီးအရည်အသွေးပြည့်မီမှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ပြီးနောက်လအနည်းငယ်အပြီးတွင်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖျက်သိမ်းရန်ရွေးချယ်သောဖြစ်ရပ်များပင်ရှိသည်။
မော်တော်ကားလုပ်ငန်းတွင်ယွမ်သန်းတစ်ရာပါသည့်အဆင့်မြင့်ကားများနှင့်သောင်းနှင့်ချီသောယွမ်ပါသည့်အနိမ့်ကားများဘေးကင်းလုံခြုံစွာမောင်းနှင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသည်အမျိုးသားအဆင့်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများ၊ လေယာဉ်ပျက်ကျစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုး။ ဤစံနှုန်းများကိုကျော်လွန်သွားသောမော်တော်ယာဉ်များကိုသာစျေးကွက်သို့တင်ခွင့်ပြုသည်။ ကားအ ၀ တ်လျှော်စက်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းသည်မရင့်ကျက်သေးပါ။ အမျိုးသားအဆင့်မရှိ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်လည်းမရှိပါ။ စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းတို့ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်၊ Haiying ကုမ္ပဏီသည်ရှည်လျားသောသမိုင်းအစဉ်အလာဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနက်ရှိုင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောမူဝါဒဖြင့်စျေးကွက်ကိုအနိုင်ရခြင်းနှင့်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ ယ်ယူသူများ၏အရည်အသွေးပေါ်လစီကိုလိုက်နာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုအဆင့်မြင့်ကားအဝတ်လျှော်စက်ကိရိယာများကိုပေးသည်။ တရုတ်ကားအ ၀ တ်လျှော်စက်အတွက်စျေးကွက်နာမည်ကောင်းနှင့်နိုင်ငံတကာနာမည်ကောင်းရခဲ့သည်။
ရှေ့သို့ CBK208 အသိဉာဏ်ကင်းသောစက်မဲ့ကားစက်ရေဆေးစက်
Ce ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအလိုအလျောက်ဘတ်စကားထရပ်ကားကားအ ၀ တ်လျှော်စက်ကို Ce အနိမ့်ပိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်
Gantry ဘောင်ဘတ်စ်ကားသည်အလိုအလျောက်အဝတ်လျှော်စက် FOB Reference Price
ရောင်းရန် gantry အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်ထရပ်ကားလျှော်စက်